စင် ကာပူ ထက် သာပဟေ့! ..စင်ကာပူ ကို မြန်မာ ကျော်ပြီ (နိုင်ငံတ ကာ ကပါ အသိ အမှတ် ပြုလိုက် တာ ဖြစ် ပါ တယ်) – Local News
ကျောင်းတိုက်တစ်ခုလုံး မီးလောင်သွားပေမယ့် မီးမသင့်ဘဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ အံ့ဖွယ် ဗုဒ္ဓရုပ်ပ... August 11, 2020
ကြူရှငျမတကျပဲ ၆ ဘာသာဂုဏျထူးဖွငျ့ အောငျမွငျခဲ့တဲ့ မိုးညှငျးမွို့မှ မမြိုးခိုငျဇငျ... August 11, 2020
တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိတဲ့အတိုင်းပါပဲလား… (ရုပ်/သံ)... August 11, 2020
မအူပင်သားရဲ့ စိန်ခေါ်မှုကို လက်ခံလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ တိုင်ရွန်…(ပွဲကောင်းတစ်ပွဲကတော့ြ... August 11, 2020
ကြား ရ ပြန် ပီ ဗျာ…. August 11, 2020
စင် ကာပူ ထက် သာပဟေ့! ..စင်ကာပူ ကို မြန်မာ ကျော်ပြီ (နိုင်ငံတ ကာ ကပါ အသိ အမှတ် ပြုလိုက် တာ ဖြစ် ပါ တယ်)
ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၄ နိုင်ငံ ရဲ့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက် ခံရပြီး ပြန်လည် နာလန်ထူသက်သာလာမှုကို နှိုင်းယှဉ်ပြ ထားတဲ့ အညွှန်း ကိန်း အရ မြန်မာနိုင်ငံ က အဆင့် ၂၀ နေရာမှာ ရပ်တည် နေပြီး စင်ကာပူ က အဆင့် ၅၁ ပါ တဲ့။ဒီ အညွှန်းကိန်း ကို တစ်နိုင်ငံချင်းစီ ရဲ့ လူဦးရေ၊ တစ်ဦးချင်း တိုင်းပြည်ဝင်ငွေ (GDP per capita)၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအစီအမံ၊ ရောဂါကူးစက်မှု၊ သေဆုံးမှုနဲ့ ပြန်လည် သက်လာ ပျောက်ကင်းမှုစတဲ့ အချက်အလက် တွေအပေါ် အခြေခံပြီး တွက်ချက်ပေးထားတာ ဖြစ်တယ်လို့ Global Covid-19 Index (GCI) ရဲ့ အချက်အလက်ကို ရည်ညွှန်းပြီး DVB သတင်းဌာနက ဖော်ပြထား တာပါ။ဒီစာရင်း ရဲ့ ထိပ်ဆုံး မှာ ထိုင်းနိုင်ငံရှိပြီး တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံက ဒုတိယ၊ အခြားသော အာရှနိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ မလေးရှားနဲ့ ထိုင်ဝမ်က စတုတ္ထနဲ့ ပ ဉ္စမအဖြစ် ကမ္ဘာအဆင့် ထိပ်ဆုံးငါးနေရာမှာ အာရှ လေးနိုင်ငံက ရပ်တည်နေကြ တာ ဖြစ် ပါတ ယ်။
တိုးတက်ပြီး ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ နယူးဇီလန်၊ လစ်သူယေးနီးယား၊ ဩစတေးလျ၊ ကနေဒါနဲ့ ဖင်လန်နိုင်ငံတွေက ဆဋ္ဌမကနေ ဒသမနေရာတွေကို ရယူထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကတော့ ကမ္ဘာ့ အဆင့် ၂၀ နေရာမှာ ရပ်တည်နေပြီး… အာရှအဆင့်မှာတော့ ထိုင်း၊ တောင်ကိုရီးယား၊ မလေးရှားနဲ့ ထိုင်ဝမ်တို့ရဲ့ နောက် အဆင့် ၅ နေရာမှာ ရှိနေတာ ဖြစ် ပါတယ်။ဒီမှာ ထူးခြားတာက…တစ်တိုင်းပြည် လုံး ကုန်ထုတ် လုပ်မှု အရရော၊ တစ်ဦး ချင်း ဝင်ငွေအရရော ကမ္ဘာ့အဆင့် အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံတွေထဲမှာ ထိပ်တန်းက ပါဝင်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက အဆင့် ၃၇ နဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံက အဆင့် ၅၁ တွေမှာ သာ အသီးသီး ရပ်တည်နိုင်ခြင်းပါပဲ။စစ်အာဏာသိမ်း အစိုးရအဆက်ဆက် အညွှန်း ကိန်း မှန်သမျှ ဘိတ်ချေးတန်း က ဗိုလ်စွဲနေကျ မြန်မာဟာ….သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်နိုင်မှုတွေ၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အဆင့်တွေမှာလည်း အောက်တန်းနောက်တန်းကျနေရာက…အခုဆိုရင် အင်အား အကြီးဆုံး နိုင်ငံကြီးတွေအပါအဝင်
တစ်ကမ္ဘာလုံးကို နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး ပညာရေး ကျန်းမာရေး အားကစားစတဲ့ ကဏ္ဍစုံမှာ ပြိုကျယိုင်လဲမတတ် ဖြစ်စေတဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကပ် ဆိုးကြီးမှာ…နိုင်ငံ စီးပွားရေး သေးငယ်လွန်း တဲ့ ကြားက၊ ပြည်သူတွေ ဓနအင်အား နွမ်းပါးကြတဲ့ ကြားက၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အရင်းအမြစ် နည်းပါးလွန်းတဲ့ ကြားက…ကိုယ့်နိုင်ငံထက် အဘက်ဘက် မှာ အပြတ်အသတ် သာလွန်နေ တဲ့ စင်ကာပူနဲ့ ဂျပန်ထက်တောင် အညွှန်းကိန်း သိသိသာသာ မြင့်မားသွားရတာဟာ…ခေါင်းဆောင်ကောင်း ရဲ့ အချိန်နဲ့ တပြေးညီ မျက်ခြေမပြတ် လေ့လာ ကြားနာ ညှိနှိုင်းပြီး မဟာဗျူဟာချမှတ်နိုင်မှု ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးရဲ့ အသေးစိတ် အကွက်ကျကျ စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှု ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ မခိုမကပ် အသက်ပဓာနမထား ကုသစောင့်ရှောက်ပေးမှု အစိုးရရဲ့ အခြေခံလူတန်းစားတွေ သက်သာချောင်ချိရေး အတတ်နိုင်ဆုံး စီစဉ်ပေးမှုတွေကြောင့်အပြင်… အရေး အကြီးဆုံး ဖြစ်တဲ့ ပြည်သူအများစု ရဲ့ စည်းကမ်းသေဝပ်စွာ လိုက်နာပြီး ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုတွေကြောင့်သာ ဖြစ်တ ယ်။
အရင်ကသာဆိုရင် ဒီလိုမျိုး ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံငယ်လေးက ကပ်ဘေးကို ကြံ့ကြံ အခံနို င်ဆုံး ထိပ်ဆုံး နိုင်ငံ ၂၀ စာရင်း ဝင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ အိပ်မက်တောင် မက်ရဲမှာ မဟုတ်တဲ့ အပြင်… အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ အပါအဝင် ကမ္ဘာအနှံ့မှာ ကာကွယ်ဆေး မရှိ၊ ကုသဆေး မရှိသေး တဲ့ ကူးစက်မြန် သေနှုန်းမြင့် ကပ်ရောဂါကြီး အရှိန်အဟုန် ပြင်းပြင်း ပြန့်ပွားလာချိန်မှာ စိတ်လျှော့ပြီး လက်မှိုင်ချနေရဖို့သာ များ ပါတယ်။အခုတော့ မက်ခဲ့ဖူးတဲ့ အိပ်မက်မျိုး တကယ် ဖြစ်လာတာမျိုးတောင် မဟုတ်ဘဲ… တစ်သက် နဲ့ တစ်ကိုယ် မက်တောင် မမက်ရဲခဲ့ဖူးတဲ့ အိပ်မက်မျိုးက အမှန်တကယ် အသက်ဝင်လာနေတာပါ။ အနှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်း စင်ကာပူ စီးပွားရေးကို ကျော်တက်နိုင်ရမယ် ဆိုတာဟာ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြက်ရယ်ပြုရလောက်အောင် ခက်ခဲ မယ့် အလုပ် မျိုး ဆိုရင်…
အခုလို ကမ္ဘာ့ ကပ်ရောဂါဘေးကြီးမှာ စီးပွားရေး အင်အားရော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု စနစ်ရော အပြတ်အသတ် သာလွန်တဲ့ စင်ကာပူထက် ရောဂါ ကာကွယ် တားဆီး တိုက်ဖျက်ရေးမှာ သာလွန်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်မယ် ဆိုတာ ဟာ လည်း တန်းတူခက်ခဲတဲ့ ယုံတမ်းစကားလိုမျိုးသာ ဖြစ်လိမ့်မယ် ဆိုတာ ငြင်းနိုင်သူ ရှိမယ် မထင်ပါဘူး။အခုတော့ ပြည်သူသာ အဓိက ဆို သလို တိုင်းရင်းသား ပြည်သူအားလုံးဟာ မိမိတို့ ကျန်းမာရေးအတွက် ငဲ့ပြီး အနီ အစိမ်းမခွဲ အစိုးရနဲ့ လက်တွဲ ညီညွတ်ခဲ့ကြလို့ ယုံတမ်းစကားအဆင့်ကနေ လက်တွေ့အောင်မြင်မှုဆီကို လှမ်းတက် လာနိုင်ပြီ ဖြစ်တာ မို့… နိုင်ငံရေး ငြိမ်းချမ်းရေးတွေမှာလည်း အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူ အားလုံး စိတ်ထားတူညီ ကြိုးစားရင်ဖြင့် နောက် ဆယ့်ခြောက်နှစ်မှာ စင်ကာပူရဲ့ စီးပွားရေး (GDP) ကို ကျော် မတက်နိုင်ဘူးလို့ မပြောနို င်ပါဘူး။
ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ဘေး ကို အန်တုနိုင်စွမ်း က ကမ္ဘာ့အဆင့် ၂၀ မှာ ရပ်တည်နိုင်တဲ့ အောင်မြင်မှုကို ပိုမို မြင်သာအောင် နှိုင်းယှဉ်ပြရရင်… ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါရဲ့ ရင်းမြစ်နိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့ တရုတ်လို လူအား ငွေအား နည်း ပညာအား အပြင် တစ်သွေး တစ်သံ တစ်မိန့်နဲ့ အကြွင်းမဲ့ အာဏာအားကိုပါ သုံးနိုင်တဲ့ နျူကလီးယား လက်နက်ရှင် ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး နံပါတ် ၂ နိုင်ငံမျိုးတောင် နာလန်ထူညွှန်ကိန်း အဆင့် ၃၅ မှာပဲ ရပ်တည်နိုင်သလို…စီးပွားရေး၊ စစ်ရေး၊ ပညာရေး သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆေးပညာ အပါ အဝင် ကဏ္ဍတိုင်းလိုလိုမှာ ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ် အဖြစ် အမြဲလိုလို ဗိုလ်စွဲနေကျ အမေရိကန်ဟာတော့ ဒီကပ်ဘေးမှာတော့ စီမံခန့်ခွဲမှု ညံဖျင်းပြီး ပေါ့ဆလွန်းတဲ့ ခေါင်းဆောင်နဲ့ ပရမ်း ပတာနိုင်လွန်း ငါတကောကောလွန်းတဲ့ ပြည်သူတွေ အချင်းချင်း အစေးမကပ် မညီညွတ်မှုကြောင့် အညွှန်းကိန်း အဆင့် ၁၂၀ မှာသာ ရှက်ဖွယ်လိလိ ရပ်တည်နေရတာ ဖြစ် ပါတယ် ။အမေရိကန်၊ ရုရှ၊ တရုတ်၊ ဗြိတိန်၊ ပြင်သ စ်၊ အီတလီ၊ စင်ကာပူ၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ဂျပန်တို့လို နိုင်ငံမျိုးတွေ အဆင့် ၂၀ အတွင်း ရပ်တည်နေနိုင်မယ် ဆိုရင် ဘာမှ မဆန်းပေမဲ့…
မြန်မာလို နိုင်ငံက အဆင့် ၂၀ မှာ ရပ်တည်နိုင် တာ ဟာ အံသြဘနန်း ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပြီး ဒီလို Miracle မျိုးကို လူထုခေါင်းဆောင် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒီချုပ်အစိုးရနဲ့ ပြည်သူတွေ အားလုံး လက်တွဲညီညီ ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ တာ ပဲ ဖြစ်တယ်။ဒီစာဟာ ဒီချုပ်ကို လော်ဘီ လုပ်တဲ့စာလို့ စွပ်စွဲမယ် ဆိုရင် ငြင်းဖို့ စိတ်ကူး လုံးဝ မရှိပေမဲ့… အစိုးရ ကောင်းကြောင်းထက် ပြည်သူတွေရဲ့ စည်းကမ်းလိုက်နာမှုကြောင့် ဒီကပ်ဘေးမှာ ဒီနိုင်ငံ သက်သာရာ ရနေတာကို သတိပေး လိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကလည်း အဓိကကျကျ ပါဝင်ပါတယ်။ ကိုဗစ်-၁၉ စတင် ဖြစ်ပွားတဲ့ ၂၀၁၉ နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ အခုလက်ရှိ အချိန်အထိ… ကမ္ဘာမှာ… အတည်ပြုလူနာ ၁၇ သန်းကျော် သေဆုံးသူ ၆ သိန်း ၇ သောင်းကျော် ပျောက်ကင်းသွား သူ ၁၁ သန်းကျော် မပျောက်ကင်းသေးသူ ၅ ဒသမ ၉ သန်း နီးပါး ရှိနေစဉ်မှာ…မြန်မာမှာ… အတည်ပြုလူနာ ၃၅၃ ဦး သဆေုံးသူ ၆ ဦး ပျောက်ကင်းသွားသူ ၂၉၆ ဦး မပျောက်ကင်းသေးသူ ၅၁ ဦးသာ ရှိတော့တာကို…Covid Visualizer က ကူးယူ ဖော်ပြထားတဲ့ ပူးတွဲပါ ပုံမှာ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင် ပါတ ယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ကိုဗစ်-၁၉ စတင် ဖြစ်ပွားစဉ်က ရောဂါ သက်သာမှုဟာ အင်မတန် နှေးကွေး နည်းပါးတဲ့အတွက် ပျောက်ကင်းနှုန်း ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာ ရှိလို့ စိတ်ပျက်အားငယ် ကြောက် ရွံ့ကြ… အတည်ပြု လူနာ ၂၂ ဦးမှာ ၃ ဦး သေဆုံးသွားချိန်မှာ သေနှုန်းက ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းတောင် ကျော်သွားလို့ ခံစစ်ကျိုးပေါက်ပြီလို့ အစိုးရကို ဝိုင်းဆဲခဲ့ကြပေမဲ့… အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု ကောင်းတဲ့ အတွက် သက်သာ ပျောက်ကင်းသွားသူ အရေ အတွက် ဟာ ကူးစက်ခံရသူ အတည်ပြုလူနာ အရေအတွက်ရဲ့ ၈၃ ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိ ရှိနေပြီး… သေဆုံးသူက ၆ ဦးမှာသာ ရပ်တန့်နေတဲ့အတွက် သေနှုန်းဟာလည်း ၁ ဒသမ ၇ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိပါတော့ တယ်။အတည်ပြု ကူးစက် လူနာ တွေ့ရှိမှု ကျဆင်းနေပြီး သေဆုံးနှုန်း က မတက်ဘဲ အောက်နားမှာတင် တန်းနေတာကို အားတက်ဖွယ် တွေ့ရမှာပါ။
ဒါဟာ စစ်ဆေးချက်တွေ၊ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်တွေအရ အခြေအနေ မကောင်းခင် အကြောက် တရား စိုးမိုးနေချိန်က ပြည်သူအများစုဟာ လက်ဆေးကြပါ၊ Mask တပ်ကြပါ၊ လူမစုဝေးကြပါနဲ့၊ မလိုအပ်ဘဲ အပြင်မထွက်ကြပါနဲ့ ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေကို တိတိ ကျကျ လိုက်နာခဲ့ကြတာ ရဲ့ ရလဒ် အသီးအပွင့်ကို ခံစားနေရတာပဲ ဖြစ်တယ်။အခုအခါမှာတော့ ရလဒ်တွေ ကောင်းလာတာ နဲ့အမျှ မကြောက်ကြတော့ဘဲ New Normal ကို အသားကျအောင် ကြိုးစားရမယ့်အစား နေရာတကာမှာ Old Normal ပြန်ဖြစ်နေကြပြီဆိုတာကို စိုးရိမ်စဖွယ် တွေ့နေရပါတယ်။ အထူး သဖြင့် လူ အများစု ဟာ ကိုယ်တိုင် Mask မတပ်ကြတော့သလို ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း စည်းကမ်းချက်အတိုင်း လိုအပ်လို့ Mask တပ်ခိုင်း လက်ဆေးခိုင်းတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ ဟိုတယ်တွေ၊ အများပြည်သူ သွားလာရာ ဈေးဝယ်စင်တာတွေက တာဝန်ရှိသူတွေကိုတောင် ပြဿနာ ရှာတာမျိုးတွေကို ကြားသိလာရ ပါတယ်။ဒီရောဂါ စဖြစ်ခါစက Mask တပ်ဖို့ လို မလို အငြင်းပွားမှုတွေ ရှိခဲ့ပေမဲ့
အခု အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခု လက်တွေ့ ဖြတ်ကျော်အပြီးမှာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အချက်အလက်တွေက Mask တပ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားမှုတွေ ကို အဆုံး သတ်ပေးလိုက်ပြီး ဖြစ်လို့ ကုသဆေး ကာကွယ်ဆေး မပေါ်မချင်း၊ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် မသုံးနိုင်မချင်း Mask တပ်ခြင်းကို ယဉ်ကျေးမှု တစ်ရပ်လို လိုက်နာကျင့်သုံး ရမှာ ဖြစ် ပါတယ် ။စီးပွားရေးနဲ့ စားဝတ်နေရေး အခြေအနေအရ အပြင်မထွက်ဖို့နဲ့ Social Distancing ကို ထိထိမိမိ တိတိ ကျကျ လိုက်နာဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ ဒီအချိန်မှာ… အနည်းဆုံး Mask ကို မဖြစ်မနေ တပ်ကြဖို့နဲ့ လက်ဆေးကြဖို့ ဆိုတဲ့ အခြေခံ စည်းကမ်းတွေ ကို ဆက်လက် လိုက်နာရင်း မိမိကိုယ် ကိုယ်ရော သူ တစ်ပါး ကိုရော ရောဂါပိုး ကူးစက်မှုကနေ ကာကွယ်ပေးရင်း ရပြီးသား ပြည်သူ့အောင်ပွဲ ကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းကြပါစို့လို့ တိုက်တွန်းလိုက် ပါတယ်။
ကမ်ဘာ့ နိုငျငံပေါငျး ၁၈၄ နိုငျငံ ရဲ့ ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျ ခံရပွီး ပွနျလညျ နာလနျထူသကျသာလာမှုကို နှိုငျးယှဉျပွ ထားတဲ့ အညှနျး ကိနျး အရ မွနျမာနိုငျငံ က အဆငျ့ ၂၀ နရောမှာ ရပျတညျ နပွေီး စငျကာပူ က အဆငျ့ ၅၁ ပါ တဲ့။ဒီ အညှနျးကိနျး ကို တဈနိုငျငံခငျြးစီ ရဲ့ လူဦးရေ၊ တဈဦးခငျြး တိုငျးပွညျဝငျငှေ (GDP per capita)၊ ကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျမှုအစီအမံ၊ ရောဂါကူးစကျမှု၊ သဆေုံးမှုနဲ့ ပွနျလညျ သကျလာ ပြောကျကငျးမှုစတဲ့ အခကျြအလကျ တှအေပျေါ အခွခေံပွီး တှကျခကျြပေးထားတာ ဖွဈတယျလို့ Global Covid-19 Index (GCI) ရဲ့ အခကျြအလကျကို ရညျညှနျးပွီး DVB သတငျးဌာနက ဖျောပွထား တာပါ။ဒီစာရငျး ရဲ့ ထိပျဆုံး မှာ ထိုငျးနိုငျငံရှိပွီး တောငျကိုရီးယား နိုငျငံက ဒုတိယ၊ အခွားသော အာရှနိုငျငံတှေ ဖွဈတဲ့ မလေးရှားနဲ့ ထိုငျဝမျက စတုတ်ထနဲ့ ပ ဉ်စမအဖွဈ ကမ်ဘာအဆငျ့ ထိပျဆုံးငါးနရောမှာ အာရှ လေးနိုငျငံက ရပျတညျနကွေ တာ ဖွဈ ပါတ ယျ။
တိုးတကျပွီး ခမျြးသာကွှယျဝတဲ့ နယူးဇီလနျ၊ လဈသူယေးနီးယား၊ ဩစတေးလြ၊ ကနဒေါနဲ့ ဖငျလနျနိုငျငံတှကေ ဆဋ်ဌမကနေ ဒသမနရောတှကေို ရယူထားပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံကတော့ ကမ်ဘာ့ အဆငျ့ ၂၀ နရောမှာ ရပျတညျနပွေီး… အာရှအဆငျ့မှာတော့ ထိုငျး၊ တောငျကိုရီးယား၊ မလေးရှားနဲ့ ထိုငျဝမျတို့ရဲ့ နောကျ အဆငျ့ ၅ နရောမှာ ရှိနတော ဖွဈ ပါတယျ။ဒီမှာ ထူးခွားတာက…တဈတိုငျးပွညျ လုံး ကုနျထုတျ လုပျမှု အရရော၊ တဈဦး ခငျြး ဝငျငှအေရရော ကမ်ဘာ့အဆငျ့ အခမျြးသာဆုံး နိုငျငံတှထေဲမှာ ထိပျတနျးက ပါဝငျတဲ့ ဂပြနျနိုငျငံက အဆငျ့ ၃၇ နဲ့ စငျကာပူနိုငျငံက အဆငျ့ ၅၁ တှမှော သာ အသီးသီး ရပျတညျနိုငျခွငျးပါပဲ။စဈအာဏာသိမျး အစိုးရအဆကျဆကျ အညှနျး ကိနျး မှနျသမြှ ဘိတျခြေးတနျး က ဗိုလျစှဲနကြေ မွနျမာဟာ….သဘာဝဘေးအန်တရာယျ ကာကှယျနိုငျမှုတှေ၊ ကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျမှု အဆငျ့တှမှောလညျး အောကျတနျးနောကျတနျးကနြရောက…အခုဆိုရငျ အငျအား အကွီးဆုံး နိုငျငံကွီးတှအေပါအဝငျ
တဈကမ်ဘာလုံးကို နိုငျငံရေး စီးပှားရေး ပညာရေး ကနျြးမာရေး အားကစားစတဲ့ ကဏ်ဍစုံမှာ ပွိုကယြိုငျလဲမတတျ ဖွဈစတေဲ့ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါကပျ ဆိုးကွီးမှာ…နိုငျငံ စီးပှားရေး သေးငယျလှနျး တဲ့ ကွားက၊ ပွညျသူတှေ ဓနအငျအား နှမျးပါးကွတဲ့ ကွားက၊ ကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျမှု အရငျးအမွဈ နညျးပါးလှနျးတဲ့ ကွားက…ကိုယျ့နိုငျငံထကျ အဘကျဘကျ မှာ အပွတျအသတျ သာလှနျနေ တဲ့ စငျကာပူနဲ့ ဂပြနျထကျတောငျ အညှနျးကိနျး သိသိသာသာ မွငျ့မားသှားရတာဟာ…ခေါငျးဆောငျကောငျး ရဲ့ အခြိနျနဲ့ တပွေးညီ မကျြခွမေပွတျ လလေ့ာ ကွားနာ ညှိနှိုငျးပွီး မဟာဗြူဟာခမြှတျနိုငျမှု ကနျြးမာရေး ဝနျကွီးရဲ့ အသေးစိတျ အကှကျကကြ စီမံခနျ့ခှဲနိုငျမှု ကနျြးမာရေး ဝနျထမျးတှရေဲ့ မခိုမကပျ အသကျပဓာနမထား ကုသစောငျ့ရှောကျပေးမှု အစိုးရရဲ့ အခွခေံလူတနျးစားတှေ သကျသာခြောငျခြိရေး အတတျနိုငျဆုံး စီစဉျပေးမှုတှကွေောငျ့အပွငျ… အရေး အကွီးဆုံး ဖွဈတဲ့ ပွညျသူအမြားစု ရဲ့ စညျးကမျးသဝေပျစှာ လိုကျနာပွီး ပူးပေါငျးဆောငျ ရှကျမှုတှကွေောငျ့သာ ဖွဈတ ယျ။
အရငျကသာဆိုရငျ ဒီလိုမြိုး ဆငျးရဲတဲ့ နိုငျငံငယျလေးက ကပျဘေးကို ကွံ့ကွံ အခံနို ငျဆုံး ထိပျဆုံး နိုငျငံ ၂၀ စာရငျး ဝငျနိုငျလိမျ့မယျလို့ အိပျမကျတောငျ မကျရဲမှာ မဟုတျတဲ့ အပွငျ… အိမျနီးခငျြးနိုငျငံ အပါအဝငျ ကမ်ဘာအနှံ့မှာ ကာကှယျဆေး မရှိ၊ ကုသဆေး မရှိသေး တဲ့ ကူးစကျမွနျ သနှေုနျးမွငျ့ ကပျရောဂါကွီး အရှိနျအဟုနျ ပွငျးပွငျး ပွနျ့ပှားလာခြိနျမှာ စိတျလြှော့ပွီး လကျမှိုငျခနြရေဖို့သာ မြား ပါတယျ။အခုတော့ မကျခဲ့ဖူးတဲ့ အိပျမကျမြိုး တကယျ ဖွဈလာတာမြိုးတောငျ မဟုတျဘဲ… တဈသကျ နဲ့ တဈကိုယျ မကျတောငျ မမကျရဲခဲ့ဖူးတဲ့ အိပျမကျမြိုးက အမှနျတကယျ အသကျဝငျလာနတောပါ။ အနှဈနှဈဆယျအတှငျး စငျကာပူ စီးပှားရေးကို ကြျောတကျနိုငျရမယျ ဆိုတာဟာ လုံးဝ မဖွဈနိုငျဘူးလို့ ပွကျရယျပွုရလောကျအောငျ ခကျခဲ မယျ့ အလုပျ မြိုး ဆိုရငျ…
အခုလို ကမ်ဘာ့ ကပျရောဂါဘေးကွီးမှာ စီးပှားရေး အငျအားရော ကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျမှု စနဈရော အပွတျအသတျ သာလှနျတဲ့ စငျကာပူထကျ ရောဂါ ကာကှယျ တားဆီး တိုကျဖကျြရေးမှာ သာလှနျအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျမယျ ဆိုတာ ဟာ လညျး တနျးတူခကျခဲတဲ့ ယုံတမျးစကားလိုမြိုးသာ ဖွဈလိမျ့မယျ ဆိုတာ ငွငျးနိုငျသူ ရှိမယျ မထငျပါဘူး။အခုတော့ ပွညျသူသာ အဓိက ဆို သလို တိုငျးရငျးသား ပွညျသူအားလုံးဟာ မိမိတို့ ကနျြးမာရေးအတှကျ ငဲ့ပွီး အနီ အစိမျးမခှဲ အစိုးရနဲ့ လကျတှဲ ညီညှတျခဲ့ကွလို့ ယုံတမျးစကားအဆငျ့ကနေ လကျတှအေ့ောငျမွငျမှုဆီကို လှမျးတကျ လာနိုငျပွီ ဖွဈတာ မို့… နိုငျငံရေး ငွိမျးခမျြးရေးတှမှောလညျး အစိုးရနဲ့ တိုငျးရငျးသား ပွညျသူ အားလုံး စိတျထားတူညီ ကွိုးစားရငျဖွငျ့ နောကျ ဆယျ့ခွောကျနှဈမှာ စငျကာပူရဲ့ စီးပှားရေး (GDP) ကို ကြျော မတကျနိုငျဘူးလို့ မပွောနို ငျပါဘူး။
ကိုယျ့နိုငျငံရဲ့ ကိုဗဈ-၁၉ ကပျဘေး ကို အနျတုနိုငျစှမျး က ကမ်ဘာ့အဆငျ့ ၂၀ မှာ ရပျတညျနိုငျတဲ့ အောငျမွငျမှုကို ပိုမို မွငျသာအောငျ နှိုငျးယှဉျပွရရငျ… ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါရဲ့ ရငျးမွဈနိုငျငံ ဖွဈတဲ့ တရုတျလို လူအား ငှအေား နညျး ပညာအား အပွငျ တဈသှေး တဈသံ တဈမိနျ့နဲ့ အကွှငျးမဲ့ အာဏာအားကိုပါ သုံးနိုငျတဲ့ နြူကလီးယား လကျနကျရှငျ ကမ်ဘာ့ စီးပှားရေး နံပါတျ ၂ နိုငျငံမြိုးတောငျ နာလနျထူညှနျကိနျး အဆငျ့ ၃၅ မှာပဲ ရပျတညျနိုငျသလို…စီးပှားရေး၊ စဈရေး၊ ပညာရေး သိပ်ပံနဲ့ နညျးပညာ၊ ကနျြးမာရေးနဲ့ ဆေးပညာ အပါ အဝငျ ကဏ်ဍတိုငျးလိုလိုမှာ ကမ်ဘာ့နံပါတျတဈ အဖွဈ အမွဲလိုလို ဗိုလျစှဲနကြေ အမရေိကနျဟာတော့ ဒီကပျဘေးမှာတော့ စီမံခနျ့ခှဲမှု ညံဖငျြးပွီး ပေါ့ဆလှနျးတဲ့ ခေါငျးဆောငျနဲ့ ပရမျး ပတာနိုငျလှနျး ငါတကောကောလှနျးတဲ့ ပွညျသူတှေ အခငျြးခငျြး အစေးမကပျ မညီညှတျမှုကွောငျ့ အညှနျးကိနျး အဆငျ့ ၁၂၀ မှာသာ ရှကျဖှယျလိလိ ရပျတညျနရေတာ ဖွဈ ပါတယျ ။အမရေိကနျ၊ ရုရှ၊ တရုတျ၊ ဗွိတိနျ၊ ပွငျသ ဈ၊ အီတလီ၊ စငျကာပူ၊ တောငျကိုရီးယား၊ ဂပြနျတို့လို နိုငျငံမြိုးတှေ အဆငျ့ ၂၀ အတှငျး ရပျတညျနနေိုငျမယျ ဆိုရငျ ဘာမှ မဆနျးပမေဲ့…
မွနျမာလို နိုငျငံက အဆငျ့ ၂၀ မှာ ရပျတညျနိုငျ တာ ဟာ အံသွဘနနျး ဖွဈစဉျ ဖွဈပွီး ဒီလို Miracle မြိုးကို လူထုခေါငျးဆောငျ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ၊ ဒီခြုပျအစိုးရနဲ့ ပွညျသူတှေ အားလုံး လကျတှဲညီညီ ဖနျတီးနိုငျခဲ့ တာ ပဲ ဖွဈတယျ။ဒီစာဟာ ဒီခြုပျကို လျောဘီ လုပျတဲ့စာလို့ စှပျစှဲမယျ ဆိုရငျ ငွငျးဖို့ စိတျကူး လုံးဝ မရှိပမေဲ့… အစိုးရ ကောငျးကွောငျးထကျ ပွညျသူတှရေဲ့ စညျးကမျးလိုကျနာမှုကွောငျ့ ဒီကပျဘေးမှာ ဒီနိုငျငံ သကျသာရာ ရနတောကို သတိပေး လိုတဲ့ ရညျရှယျခကျြ ကလညျး အဓိကကကြ ပါဝငျပါတယျ။ ကိုဗဈ-၁၉ စတငျ ဖွဈပှားတဲ့ ၂၀၁၉ နှဈကုနျပိုငျးကနေ အခုလကျရှိ အခြိနျအထိ… ကမ်ဘာမှာ… အတညျပွုလူနာ ၁၇ သနျးကြျော သဆေုံးသူ ၆ သိနျး ၇ သောငျးကြျော ပြောကျကငျးသှား သူ ၁၁ သနျးကြျော မပြောကျကငျးသေးသူ ၅ ဒသမ ၉ သနျး နီးပါး ရှိနစေဉျမှာ…မွနျမာမှာ… အတညျပွုလူနာ ၃၅၃ ဦး သဆေုံးသူ ၆ ဦး ပြောကျကငျးသှားသူ ၂၉၆ ဦး မပြောကျကငျးသေးသူ ၅၁ ဦးသာ ရှိတော့တာကို…Covid Visualizer က ကူးယူ ဖျောပွထားတဲ့ ပူးတှဲပါ ပုံမှာ နှိုငျးယှဉျကွညျ့နိုငျ ပါတ ယျ။
မွနျမာနိုငျငံ မှာ ကိုဗဈ-၁၉ စတငျ ဖွဈပှားစဉျက ရောဂါ သကျသာမှုဟာ အငျမတနျ နှေးကှေး နညျးပါးတဲ့အတှကျ ပြောကျကငျးနှုနျး ၁၀ ရာခိုငျနှုနျးအောကျသာ ရှိလို့ စိတျပကျြအားငယျ ကွောကျ ရှံ့ကွ… အတညျပွု လူနာ ၂၂ ဦးမှာ ၃ ဦး သဆေုံးသှားခြိနျမှာ သနှေုနျးက ၁၃ ရာခိုငျနှုနျးတောငျ ကြျောသှားလို့ ခံစဈကြိုးပေါကျပွီလို့ အစိုးရကို ဝိုငျးဆဲခဲ့ကွပမေဲ့… အခုလကျရှိအခြိနျမှာတော့ ပွုစုစောငျ့ရှောကျမှု ကောငျးတဲ့ အတှကျ သကျသာ ပြောကျကငျးသှားသူ အရေ အတှကျ ဟာ ကူးစကျခံရသူ အတညျပွုလူနာ အရအေတှကျရဲ့ ၈၃ ရာခိုငျနှုနျးကြျောအထိ ရှိနပွေီး… သဆေုံးသူက ၆ ဦးမှာသာ ရပျတနျ့နတေဲ့အတှကျ သနှေုနျးဟာလညျး ၁ ဒသမ ၇ ရာခိုငျနှုနျးသာ ရှိပါတော့ တယျ။အတညျပွု ကူးစကျ လူနာ တှရှေိ့မှု ကဆြငျးနပွေီး သဆေုံးနှုနျး က မတကျဘဲ အောကျနားမှာတငျ တနျးနတောကို အားတကျဖှယျ တှရေ့မှာပါ။
ဒါဟာ စဈဆေးခကျြတှေ၊ ကိနျးဂဏနျး အခကျြအလကျတှအေရ အခွအေနေ မကောငျးခငျ အကွောကျ တရား စိုးမိုးနခြေိနျက ပွညျသူအမြားစုဟာ လကျဆေးကွပါ၊ Mask တပျကွပါ၊ လူမစုဝေးကွပါနဲ့၊ မလိုအပျဘဲ အပွငျမထှကျကွပါနဲ့ ဆိုတဲ့ စညျးကမျးခကျြတှကေို တိတိ ကကြ လိုကျနာခဲ့ကွတာ ရဲ့ ရလဒျ အသီးအပှငျ့ကို ခံစားနရေတာပဲ ဖွဈတယျ။အခုအခါမှာတော့ ရလဒျတှေ ကောငျးလာတာ နဲ့အမြှ မကွောကျကွတော့ဘဲ New Normal ကို အသားကအြောငျ ကွိုးစားရမယျ့အစား နရောတကာမှာ Old Normal ပွနျဖွဈနကွေပွီဆိုတာကို စိုးရိမျစဖှယျ တှနေ့ရေပါတယျ။ အထူး သဖွငျ့ လူ အမြားစု ဟာ ကိုယျတိုငျ Mask မတပျကွတော့သလို ကနျြးမာရေး ဝနျကွီးဌာနရဲ့ ညှနျကွားခကျြအတိုငျး စညျးကမျးခကျြအတိုငျး လိုအပျလို့ Mask တပျခိုငျး လကျဆေးခိုငျးတဲ့ စားသောကျဆိုငျတှေ၊ ဟိုတယျတှေ၊ အမြားပွညျသူ သှားလာရာ ဈေးဝယျစငျတာတှကေ တာဝနျရှိသူတှကေိုတောငျ ပွဿနာ ရှာတာမြိုးတှကေို ကွားသိလာရ ပါတယျ။ဒီရောဂါ စဖွဈခါစက Mask တပျဖို့ လို မလို အငွငျးပှားမှုတှေ ရှိခဲ့ပမေဲ့
အခု အခြိနျအတိုငျးအတာ တဈခု လကျတှေ့ ဖွတျကြျောအပွီးမှာ ထှကျပျေါလာတဲ့ အခကျြအလကျတှကေ Mask တပျခွငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး အငွငျးပှားမှုတှေ ကို အဆုံး သတျပေးလိုကျပွီး ဖွဈလို့ ကုသဆေး ကာကှယျဆေး မပျေါမခငျြး၊ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ တှငျတှငျကယျြကယျြ မသုံးနိုငျမခငျြး Mask တပျခွငျးကို ယဉျကြေးမှု တဈရပျလို လိုကျနာကငျြ့သုံး ရမှာ ဖွဈ ပါတယျ ။စီးပှားရေးနဲ့ စားဝတျနရေေး အခွအေနအေရ အပွငျမထှကျဖို့နဲ့ Social Distancing ကို ထိထိမိမိ တိတိ ကကြ လိုကျနာဖို့ မဖွဈနိုငျတော့တဲ့ ဒီအခြိနျမှာ… အနညျးဆုံး Mask ကို မဖွဈမနေ တပျကွဖို့နဲ့ လကျဆေးကွဖို့ ဆိုတဲ့ အခွခေံ စညျးကမျးတှေ ကို ဆကျလကျ လိုကျနာရငျး မိမိကိုယျ ကိုယျရော သူ တဈပါး ကိုရော ရောဂါပိုး ကူးစကျမှုကနေ ကာကှယျပေးရငျး ရပွီးသား ပွညျသူ့အောငျပှဲ ကို ဆကျလကျ ထိနျးသိမျးကွပါစို့လို့ တိုကျတှနျးလိုကျ ပါတယျ။
ဆရာမင်းသိမ်းခိုင် (ရွှေရမ်းထူးလင်း)၏ ၂၀၂၀ သြဂုတ်လ (၁)ရက်မှ ၊ (၇)ရက်အတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ယတြာပြုရန်ဟောစာတမ်း
သိန်းတစ်သောင်းခွဲပေါက်တဲ့သူငယ်ချင်းအတွက် ဝမ်းသာနေတဲ့ ယုန်လေး
ကျောင်းတိုက်တစ်ခုလုံး မီးလောင်သွားပေမယ့် မီးမသင့်ဘဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ အံ့ဖွယ် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်
ကြူရှငျမတကျပဲ ၆ ဘာသာဂုဏျထူးဖွငျ့ အောငျမွငျခဲ့တဲ့ မိုးညှငျးမွို့မှ မမြိုးခိုငျဇငျသျော
တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိတဲ့အတိုင်းပါပဲလား… (ရုပ်/သံ)
ကြား ရ ပြန် ပီ ဗျာ….